Somaliland.Org » Naqdiga Miisaaniyada Somaliland ee Sannadka 2006
March 11th, 2006 Comments Off Naqdiga Miisaaniyada Somaliland ee Sannadka 2006
Miisaaniyado cilmi uuma baahna ee caqli ayaay u baahantahay miisaaniyadana caqligii ayaa ka maqan. Sannada walba miisaaniyada Somaliland (SL) waan naqdiyaa aniga oo soo shaac bixinaaya madmadawga ku jira si gaar ahna u qiimeynaaya tayda miisaaniyada. Caado la gooya cadho ALLE ayaay leedahy ee miisaaniyada sannadkan 2006 oo aan faaqidayna waa tan. Waxa kale oo aan sannadkan idiin soo gudbinayaa miisaaniyad aan anigu hadan ahey Cali Gulaid soo diyaariyay oo ku saleysan dakhliga xukuumado qiratay oo aan garab dhigaayo ta xukuumada ee bal labada isu baaciya.
Sida ku qayaxan miisaaniyadani waa mid xooga la saray sirdoonka iyo ciidamada sidii kuwii hore. Waxa kale oo u daliil ah hadalkii uu wasiirka maaliyado Xuseen (Cawil) Cali Ducaale ku hal qabsaday markii uu miisaniyada u gudbinaayay Golha Wakiilada ee ahaa sidan, “ Wasiirka Uganda ayaa aniga iyo Wasiirka Khaarajiga Marwo Edna Adan nagu yidhi ictiraaf waxa idiinku dhaw ciidan xoog weyn oo aa sameysataan”. Haddi aay taasi dhab tahey miisaaniyadani waa tii Somaliland lagu ictiraaf lahaa waayo boqolkiiba in ku dhaw lixdan (60%) ayaa sirdoon iyo ciidan ku baxaysa. Taasina waa wax dumis. Waxaana la odhan karaa walee reerka miisaaniyadan ku tala gelayaa ma guuro. (Qiimeynta shilinka SL waxa aan ku saleeyay Sl. Sh 5000 = US$. Taasi oo ah ta dekedda Berbera aay ku saleysay miisaniyda Dekedda ee sida uu la soco)
Murtida oo gaaban soo diyaarinta iyo isku duba ridka miisaaniyada 2006 guud ahaan sannadkan ayaay uugu leedataa. Waxa se ka sii leeta tayadeeda. Markii aan ka baaran degayna waxa aan ku go’aamiyay ina aan loogu tala gelin baahida dhaqaale iyo saboolnima naafeysay shacbiga ina lagu shafshafeeyo. Waayo waxa ka muuqata soof daran habaabis, been abuur, aduun lumis, qaladaad, iyo sharci jebin intoba. Waxaana ka maqan hanti-dhawr mashaariic horumar oo wax ku ool ah iyo aragti lagu gayoodo. Waxa inta u raaca ma dhameys tirna oo ilaha dakhliga in door ah ayaa ka maqan. Waxa taa ka sii daran kharashka iyo dakhligu oo aan isu dheeli tirneyn. Hadaba Naqdigan oo dheer si uu u hawl yaraado fahamkiiso waxa uu u kala qeybsan yahey lix ( 6 ) dan qeybood ee hoos ku qoran:
Qeybta koowaad ( I ) Waxa aay Ka Kkooban Tahey:
a) Qodobada Distoorka ee miisaniyada khuseeya
b) Naqdin qodobada Distoorka
c) Hab dhaqanka dhaqaale ee xukuumada iyo
d) Waxa aay miisaaniyadani kuwii hore kaga duwantahey.
Qeybta Labaad ( II )Waxa aay Ka Kooban Tahey:
a) Kharashak Laan-Cruusada –Baabuurta
b) Ciidanka Asluubta
d) Ilaalada Qasriga
e) Qeybta Xukuumada ee Fulinta (Executive)
Qeybta Sadexaad ( III ) Waxa aay Ka Kooban Tahey:
a) Tacliinta Sare
c) Naafada iyo Agoomaha
d) Kharashka Yaryar (Miscellaneous)
e) Martiqaadka (Entertainment/Laalushka)
f) Sirdoonka iyo ciidamada
g) Wasaaradaha wax soo saarka iyo daryeelka dadka
Qeybta Afraad ( IV ) Waxa aay Ka Kooban Tahey:
a) Godoloolada Dakhliga
b) Kharashka Yaabka leh
Qeybta Shanaad ( V ) Waxa aay Ka Kooban Tahey:
a) Qaladaadka ku jira miisaniyada 2006
b) Qaladka ku jira tirada Shaqaalaha
c) Talo iyo
Qeybta lixaaad ( VI ) Waxa aay Ka Kooban Tahey Shaxda Guud ee Miisaaniyada Xukuumado soo diyaarisay
Qeybta todobaad (VII) Waxa aay ka kooban tahey shaxda Guud ee Miisaaniyada Cali Gulaid soo diyaariyay
QEYBTA KOOWAAD ( I )
Distoorka (QODOBKA 55AAD) — MIISAANIYADDA
1. Golaha Wakiiladu waxa uu ka doodi karaa, waxna ka beddeli karaa miisaaniyadda, kuna ansixinayaa go’aan Gole.
2. Haddii ansixinta miisaaniyadda cusubi dhammaan weydo ka hor bilowga sannad- maaliyadeedka cusub, waxa lagu dhaqmayaa miisaaniyaddii hore inta ay ka soo baxayso miisaaniyadda cusubi.
3. Golaha Wakiilada ayaa oggolaanaya gelidda kharash kasta oo aan miisaaniyadda ku jirin.
4. Xeer ayaa caddaynaya habka soo diyaarinta miisaaniyadda guud iyo sannad­maaliyadeedka.
5. Xeer ayaa caddaynaya miisaaniyadda iyo xisaab-xidhka hay’adaha, wakaaladaha iyo shariikadaha dawladeed ama kuwa ay wax ku leedahay iyo u soo bandhigidooda Golaha Wakiilada.
6. Waa waajib u soo bandhigidda Golaha Wakiilada xisaab-xidhka sannad­maaliyadeedkii dhammaaday muddo aan ka badnayn lix bilood oo ka bilaabanta taariikhda dhammaadka sannad-maaliyadeedka, iyadoo Golaha Wakiilladu ka doodayo, go’aanna ka soo saarayaan.
7. U soo bandhigidda xisaab-xidhka miisaaniyadda waxa u xilsaaran Hanti­dhawraha Guud.
Naqdi Qodobada Distoorka
Ugu horeyn halkaa waxa ka cad ina Golaha Guurtidu aanu ansixinta miisaaniyada shaqu ku laheyn haba yaraatii. Waxa kale oo iyana ku cad ina aay masuuliyada uugu weyni saarantahey Golaha Wakiilada. Miisaaniyada cida soo diyaarineysaa Distoorka kuma qayexna waxa se ina qeybta Fulinto (Executive) soo diyaarineyso laga dheegan karaa halka odhaneysa “ Golaha Wakiilado wuu ka doodi karaa”. Si kastaba ha ahaato ee mar haddii Golaha Wakiilado aay waxa ay doonaan ka bedeli karaan, kuna kordhin karan si aan xad laheyn oo aay xata tii loo soo gudbiyay mid ka gedisan ansixin karaan waxa cida soo diyaarineysa lagaga murmaa waa wakhti lumis.
Waxa se doodi ka taagan tahey ina uu Madaxweynuhu soo diidi karo iyo inkale. Dadka cilmiga u leh ee ku ta khusasay qareenimada waxa ayay ka shaki qabaan ina uu Madaxweynuhu qaynooniyana xaq u leeyahey ina uu soo diidi karo iyo in kale. Dooduna waxa aay ka taagan tahey labadan kalmadood ee af Ingreesiga ah “resolution” iyo “bill”. Distoorku ansixinta miisaaniyada waxa uu ku sheegayaa “resolution” ee kuma sheegaayo “bill”. Waxaanu qaynooniyan Madaxweynuhu soo diid kara wixii ah ‘bill” ee ma soo diidi karo wixii ah “resolution”. Waxaanay doodu u xoog badan tahey mar hadii lagu ansixinaayo “resolution” ina aanu qeynoonku Madaxweynaha u asmaxaheyn ina uu soo diido. Hase yeeshee taa waxa ka jawaabi cidii cilmi u leh. Si kastaba ha noqotii xataa haddi uu soo diido waxa aay ku ansixin karaan 2/3.
Hab Dhaqanka Dhaqaale ee Xukuumada
Miisaaniyada la soo diyaariyay iyo sida loo soo diyaariyay waxa la fahmi karaa uun marka la fahmo sida xukuumado u shaqeyso. Sidaa awgeed waxa daruuri ah ina aan wax yar oo kooban ka idhahdo sida xukuumada Riyaale u shaqeyso. Somaliland afka waxa aay ka sheegataa ina aay tahey demoqraadiyda ku saleysan Distoor iyo qawaaniin. Hase yeeshee waxa aay sheegato iyo sida ay u shaqeysaa waa kaaf iyo kala dheeri. Runtii saddexda waaxood ee kala ah Fulinta, Garsoorka iyo Qaynoon-dejinto ee aay aheyd ina aay kala madax banaanaadaan ayaa SL isugu shubtay waaxda Fulinta. Taasina waxa aay keentay ina Madaxweyne Riyaale uu noqdo kelidii talis hantidii ummadan sida uu doono uugu tagrifalo isaga oo ka faa’ideysanaaya baahida wadanka ka jirta. Haddi cid shaqo la qoraayo waa ina uu isagu soo saxeexaa haddi dhul la bixinaayo waa ina uu isagu soo saxeexa. Halkii shilin ka soo gelaayayna cid baa u fadhida oo isaga ayaay ku soo hoyataa. Khayraadkii wadankan hadba ciddi u jeeb roon ayuu ka xarashaa. Sidaasi awgeed jeebka qudha ee irmaani waa kiisa. Wixii uu u godladaana waa kuwa isaga uugu mahadnaqaaya halkii aay Alle uuku shukri la haayeen oo aan Riyaale la’aanti shaqu heleen. Markaa waa qaar uu isagu korsaday iyo qaar dhaameel ku qaba oo ku daneysanaaya oo marka uu sii jeesto dadka la xanta. Siyaasada Riyaale waxa ay isugu soo ururtay afmiishaariinta xoolo ku kasbo maanta berito yeelkeed e
Xaalada ceyn kaasi ihi waxa aay abuurtay ina uu dakhligii wadanka wixii isaga iyo rabaciisa ka soo hadha ku sheego MIISAANIYAD. Inta uu soo bandhigana uu yidhaahdo dacawooy qeybi. Sheekadii libaaxu yidhi dacawooy habar dugaag wax u qeybina waa la socotaan. Markaa miisaaniyadona waa iska sawir iyo been abuur kharashku halka uu ku qoranyahey iyo halka uu ku baxaa waa kala duwan yihiin. Wasaarad u madaxbanan ina aay miisaaniyadeeda u isticmaashu sida loogu qoray amba marka horeba wax laga weydeeya ma jirto. Waxa aan uuga socdaa miisaaniyada meesha ku qoran macna weeyn oo aay ku fadhidaa ma jirto mar haddi halkii loogu tala galay ina aay ku baxday iyo inkale aan cidi hubineyn. Waxa aan halkaa ku kordhinayaa Mushaharka Madaxweynahana waxa aanad uu la yaabin inta aan meelna ku qorneyn ee toos uugu timaada ee aan khasnada dawlada soo marin ayaa ka badan. Sida aa ka war qabtaana dhawr iyo tobankii sanno ee ina soo dhaafay Golaha Wakiilada ayuunbaa dhaameel loo daadin jiray dabeetana waay u shaan badeyn jireen. Maanta se Golaha cusub ee Wakiilado waxa la filayaa ina uu wax bedalo. Waase loo wada joogi.
Miisaaniyado waa dakhli iyo kharash. Ilaa maanta dhkliga waxa gacanta ku heysa soona gudbisa hambada la soo reebo xukuumada iyada oo dakhli isku dhan ku sheegeysa. Golaha Wakiiladuna waxa uu qeybin karaa uun waxa xukuumado tidhahdo waxaa ku talagala. Markaa ilaa inta uu Golohu sameysanayo shaqaali uu qaabilsan dakhliga iyo hubsiimadeesa waxa aay ku qasban yiheen ina aay qeybiyaan hambada xukuuumado u soo REEBTO. Waxa se muhiim ah ina la fahmo dakhligu halka uu ku bixi karo masu’uliyadiisu waxa aay saaran tahey Golaha Wakiilada ee ma saaran Fulinta (Executive).
Maxaay kuwii Hore Kaga Duwantahey
Guud ahan wixii kuwii hore ka xishoon jireen ayaay tan u badheedhay iyada oo aan cidna wax iskaga tirinaheyn. Badheedh kaas oo kuwii hore ka badan kana baaxd weyn. Waxa ka mid ah sirdoon iyo ciidamada oo aay ku baxayso 58.27%, Agoomaha iyo Naafada oo lagu qoray 6.23% , NGO Marwada Madaxweynuhu iska maamulato oo xukuumado fungareyso iyo wax yaale kale oo iska hadlaw ina igare ah. Bal yaan se ka hordhicin. Waxa kale oo aay kuwii kale kaga duwan tahey oo la odhan kara waay kaga leedataa qaladaad fara badan oo aay ka muuqato in aan cidna lagala tashan xata wasaaradaha aay khuseyso shacbiga iska dhaafoo oo inta meel madoow lala galay wixii la doono la iska qorqoray dabeetana markii iftiinka loo soo saaray cid kasta oo indha lihi aay aragtay halkii kow u gee kow (1+1=2) aay laba ka noqon laheyd ina aay wax kale noqotay iyada oo sida ku cad xisaab xidhka iyo sameynta miisaniyada aay ku baxday $43,600 (bogga 24/M/xigee1.5.14C).
Guud ahaan ka sokow waxa yaalaha aay Khaas ahaan kaga duwantahey kuwii hore waxa ka mid ah:
a) Dakhliga oo aan dabooleyn kharshka.
b) Deyman aay xukuumada qirtay ina aay jiraan.
c) Tafatirkii dakhliga oo kuwii hore la socon jiray
d) Dakhliga hay’adaha aay ka midka yiheen Bangiga dhexe, TOTAL, biyaha, laydhka iyo qar kale
e) Amaaho wasiirka maliyado sheegay oo dhan Sl. Sh 2,727,130,373/$545,426 oo dhaafsan kii loogu talagalay oo aay wasaaradaha qaar galeen
QEYBTA LABAAD ( II )
Wax yaalaha uugu waa weyn ee hantida yar lagu lunsado waxa ka mid aha baabuurta lagu xaragooda ee loo yaqaano Land cruser iyo kuwa la mid ka ah ee wasiirada iyo wasiira dawlaha kor u dhaafay 50ka aay ku tamash leeyaan. Kharashkaa oo aanu qalabka ciidanku ku jirini waxa uu dhan yahey Sl Sh 7,136,765,760/$1,427,353 (4.33%) waxa uu ku dhawdhaw yahey miisaaniyada W/Waxbarashada $1,745,866 waxaanu ka badan yahey miisaaniyada lix (6) wasaaradood oo la isku daro oo kala ah:
a) Beeraha $244,896
c) Xoolaha $267,500
d) Kaluumeysiga $251,866
e) Reer Guuraaga $217,427
f) Ganacsiga iyo Warshadaha $217,538
g) Hanti-dhawrka $203,006
Waxa kale oo kharashka Baabuurto ka badan yahey miisaaniyada wasaaradahan iyo Hay’adahan:
a) Golaha Wakiilada $1,091,724
b) Golha Guurtida $793,563
c) Hawlaha Guud $1,139,304
d) Caafimaadka $1,091,724
e) Cadaalada oo dhan $947,308
Haddi aay run tahay ina xoolaha inta leegay aay ku baxayaan ciidanka Asluubta waxa la odhan karaa Somaliland jeel ayay ku wada jirtaa. Waxa se run ah ina uu yahay kharsh meesha lagu dabraday oo aay hubaal tahey ina uu meel kale ku baxaayo. Taasi oo la odhan karo waa khiyaama cudmaa. Ciidanka Asluubta waxa haysta nin reer Awdal ah oo la yidhaahdo Suldan Cabdi Guray oo Madaxweynuhu isku haleyn ku qabo. Daayaca jeelasha ka taagan waa mid laga wada dherigsan yahey aniguna hadda ku celin maayo. Kharashka lagu qoray Ciidanka Asluubtu waa ($1,344,464) waxaanu ka badan yahey todoba (7) wasaaradood oo la isku daray oo isku noqonaaya $1,333,340 ku waas oo kala ah:
a) Cadaladda $89,100
b) Beeraha $244,896
c) Ganacsiga $217,538
d) Kaluumiysiga $251,866
f) Xoolaha $267,500
g) Xidhiidinta golayasha $45,010
Waxa kale oo aay miisaaniyada ciidanka asluubta ka badantahey miisaaaniyada:
a) Caafimadka $1,091,724
b) Hawlaha Guud $1,139,304